Posted by ငြိမ်းဝေ at 5:49 PM
wai zin December 3, 2009 at 6:39 PM
အ၇မ်းတကိုယ်ကောင်းဆန်လွန်းနေသလားလို့.. Pdf File ကိုမျှော်နေပါတယ်.. comment ရှည်ေ၇းနိုင်အောင်
ကြိုးစားပါဦးမယ်..Myanmar Font Typing အခက်အခဲ၇ှိနေလို့ပါ..
မီးမီးချစ် December 3, 2009 at 7:56 PM
ဝေကို ကလေး အရွယ် နဲ့ ယူခဲ့ ပြီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စောင့်ရှောက်သင့်ပါလျှက်နဲ့ မစောင့်လျှောက်ဘူး.. ပဲ့ပြင်သွန်သင် ရင် ရရက်နဲ့ကျိတ်ပြီး
အုံ့ ပုန်းလုပ်နေတယ်..ယောက်ကျားပီသတဲ့စိတ် မရှိဘူး...
သူကတော့ အေးချမ်းနေပြီ ဆိုပြီး ဝေနဲ့ ပြန်တွေ့ ရင် ပူလောင်ရမှာ ကြောက်နေတယ်. အဓိကကတော့ ဝေကို အောက်တန်းကျတယ် ဆိုပြီး ကျိတ်အထင်သေးတာ ပါပဲ...စပါးသယ်တဲ့ မိန်းခလေးကို သူလို လူနဲ့ မတူမတန်ဘူးထင်လို့ ...လွယ်လွယ်ယူ လွယ်လွယ် စွန့်ပစ် သွားတာပဲ...ကိုကို ဆိုတဲ့လူကို မုန်းမိပါတယ်...
အတ္တကြီးလွန်းတယ် ထင်တာပဲ.. ဝတ္တုအနေနဲ့ ကတော့ အရမ်းကို ဆွဲဆောင်မှူ့ ရှိတာပဲ.. နိဂုံး ကိုသိလျှက်နဲ့ မျှော်လင့်နေမိသေးတာ...ပြန်များခေါ်လိုက်မလားလို့ ..
စိတ်ရှည်လက်ရှည် တင်ပေးတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်...
Sint Si December 3, 2009 at 10:32 PM
It's very touching story. "Ko Ko" made the decision base on his feeling and letters from his friends only.He is the looser.
I want him to say "good bye" at least. I wonder why.....Wai can see empty seat and can't recognize him in the dark???
Thetmar December 4, 2009 at 1:53 AM
ရင် ထဲမှာတော် တော် ဟာ သွားတယ် ကို ကို က ခင့် ဝေကို ထားသွားမယ် ဆိုတုန်း ကတည်းကပါ။ ကြားလူတွေ ရဲ့ အမြင် အထင်ကြောင့်စပါးသယ် အလုပ်သမလေးကိုအထင်သေးသွားတယ်၊စွန့်ပစ် ရက်နိုင်တာကတော့အံသြစရာပါ။နောက်ဆုံး မှာတော့ ပစ် သွားသူပဲ တမြေ့ မြေ့မျှော်လင့် ကြေ ကွဲ သွားအောင် ရေးထားတာ ကောင်းပါတယ။်ရင်ထဲမှာ တခုခုကျန်ခဲ့အောင် ကို ကောင်းလွန်းတဲ့ ဝတ္ထု ပါ။
ဝေဖန်တာမှားသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ ဆရာ။ သိပ်ကြိုက်လွန်းလို blog တွေ ကို လယ်တိုင်းအရင် ရှာ ဖတ်မိတဲ့ blog ဖြစ်သွာပါတယ်။ ဖတ်ခွင့် ရအောင် တင်ပေးတာ ကျေးဇူး ပါ ဆရာ။
Nyi Nyi December 4, 2009 at 7:18 PM
ကိုကိုနေရာမှာကိုယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။မဝေခွဲနိုင်ပါဘူး။လွယ်လွယ် စွန့်ပစ် သွားတာပဲ.လို့ပြောတာလွယ်ပေမဲ့သစ္စာ မရှိသူကိုဆက်ပေါင်းသင်းလို့လူသတ်မှုဖြစ်မှာလဲစိုးရသေးတယ်။ဥနှောက်ကကိုကို လိုဘဲထားခဲ့ချင်ပေမဲ့နှလုံးသားကထားခဲ့နိုင်ဖို့ပြန်မခေါ်မိဖို့တော်တော်မလွယ်ပါ။
ကိုရဲ့ပျော့ညံ့တဲ့စရိုက်ကိုအမေဆိပြန်မှီခိုချင်တဲ့အခါမြင်နိုင်သည်၊gone with the wind မှAshley နဲ့Scarlet Ohara လိုသတိရမိသည်။
"ဝေသည် လက်နှစ်ဖက်၌ ရေနွေးဖြင့် ပြုတ်လျှော်ထားသော ကျနော့် ပြည်ပေကျံနေသည့် အဝတ်များကို တဖက်သူ့ကွပ့်ပျစ်ပေါ်တွင် လှန်းလိုက်ပြီး ကျနော့် ကိုလှမ်းကြည့်ကာ ပြုံးလေသည်။
“သားကြီးကလဲကွယ် အမေခဏကလေး မရှိရင် တကြော်ကြော် ဖြစ်တော့တာဘဲ” ဟု ပြောပြီး ရယ်သည်။"
Kane November 30, 2011 at 12:22 AM
ဒီဇာတ်ကောင်ကတော့ ဖတ်ဖူးသမျှဝထ္ထဇာတ်ကောင်တွေထဲမှာ အတော်ချာတယ်ကွာ။ ဝထ္ထုအရေးအသားကတော့ မဆိုးပါဘူး။ ဒီလိုဇာတ်ကောင်မျိုးကိုတော့ လူငယ်တွေ လုံးဝအတုမယူကြပါစေနဲ့။